अलास्का WIC | जेपीएमए, इंक
eWIC यहाँ छ!
हाम्रो WIC प्रोग्राम चेकबाट इलेक्ट्रोनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (EBT) कार्डमा सर्दै छ जुन हामी "eWIC" मा कल गर्दैछौं। नयाँ eWIC कार्ड डेबिट कार्डजस्तो देखिन्छ र तपाईंको परिवारको WIC सुविधाहरू एक ठाउँमा छन्।
यो छिटो छ - चेकआउटमा समय बचत गर्दछ!
यो लचिलो छ - एक पटकमा तपाईंको WIC खाना भन्दा थोरै वा धेरै खरीद गर्नुहोस्!
यो सरल छ - थप कागज जाँचहरू छैनन्!
eWIC रोलआउट अगस्त, 2019 को अन्त्य सम्म राज्य-व्यापी पूर्ण हुनेछ। त्यसैले यदि तपाईंले अहिलेसम्म आफ्नो कार्ड प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, तपाईं चाँडै गर्नुहुनेछ!
EWIC भिडियो हेर्नुहोस्
तलको भिडियोले तपाइँले तपाइँको eWIC कार्ड प्राप्त गर्नुहुँदा के अपेक्षा गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ र तपाइँको WIC खाद्य पदार्थहरूको लागि किनमेल गर्न यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ।
म कसरी मेरो कार्ड सक्रिय पार्छु?
(844) 386-3149 कल गरेर वा ebtEDGE.com मा पोर्टल (ebtEDGE भनिन्छ) अनलाइन जाँदै पिन चयन गर्नुहोस्। कार्डधारकको जन्म मिति र पिन सेट गर्न घरको मेलि z् ज़िप कोड उपलब्ध छ।
क्लिनिक कर्मचारीहरूले तपाईका लागि यो गर्न सक्दैनन्। तपाईंको पिन व्यक्तिगत र गोप्य छ। तपाईं यसलाई कुनै पनि समयमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
एउटा परिवारमा कतिवटा eWIC कार्डहरू हुन सक्छन्?
एक "घर" प्रति जहाँसम्म, यदि तपाईं बहु "घरहरु" को लागी शपिंग गर्दै हुनुहुन्छ (उदाहरण को लागी तपाइँ WIC मा धेरै बच्चाहरु संग एक पालक अभिभावक हो) तपाई बहुविध कार्डहरु संग किनमेल गरी सक्नुहुनेछ।
के भयो भने मेरो कार्ड गुमाएको छ वा चोरी छ?
यदि तपाईंलाई विश्वास छ कि तपाईंले अस्थायी रूपमा आफ्नो कार्ड हराउनु भएको छ भने, तपाईंले सहयोगको लागि आफ्नो स्थानीय WIC क्लिनिकमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको कार्डमा "होल्ड राख्नुहोस्" सोध्नुहोस्।
यदि यो चोरी भएको छ वा निश्चित रूपमा हराएको छ भने तपाईं कल गरेर कार्ड रद्द गर्न सक्नुहुन्छ र क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुनेछ (844) 386-3149 वा पोर्टलमा अनलाइन गइरहेको (ebtEDGE भनिन्छ) मा vi.alaska.gov। थप रूपमा, तपाईले आफ्नो स्थानीय क्लिनिकलाई कल गर्न र नयाँ कार्ड अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो तपाईंको पहिलो वा दोस्रो हराएको / चोरी भएको कार्ड हो भने, नयाँ कार्ड प्राप्त गर्न तपाईंको स्थानीय क्लिनिकमा कल गर्नुहोस्।
यदि 3rd कार्ड हराएको / एक बर्ष भित्र चोरी भयो भने, तपाईंले कार्ड रद्द गर्नुपर्नेछ, र नयाँ कल गरेर पुन: क्रमबद्ध गर्नुहोस्। (844) 386-3149, वा अनलाइन जानुहोस् ebtEDGE.com। कृपया सावधान रहनुहोस् कि ग्राहक सेवा लाइन वा अनलाइन मार्फत अर्डर गरिएका कार्डहरू तपाईंलाई पुग्न केहि हप्ता लाग्न सक्छ, किनकि तिनीहरू राज्य बाहिर पठाइन्छन्।
म कसरी खरीद गर्न सक्छु भनेर मलाई थाहा हुनेछ?
क्लिनिकमा कार्ड जारी गरेपछि तपाईका सुविधाहरूको र खाना सूचीको प्रिन्ट-आउट प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंले क्लिनिक छोड्नु भएपछि निम्न सुविधाहरूमा तपाईंको सुविधाहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ:
WICShopper मा "मेरा बेनिफिटहरू" सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्।
क्लिनिकबाट खाद्यान्न लाभहरूको प्रिन्ट आउट समीक्षा गर्नुहोस्।
स्टोरमा तपाईं "ब्यालेन्स अनुसन्धान" अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको अन्तिम रसिद समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
पोर्टल ebtEDGE.com प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको परिवारको बाँकी सुविधाहरू हेर्न।
मा ग्राहक सेवा लाईन कल गर्नुहोस् (844) 386-3149.
के म मेरो साथीलाई मेरो लागि शपिंग गर्न कार्ड दिन सक्छु?
हो! व्यक्ति जो कार्ड जारी गरिएको छ, र प्राथमिक कार्डधारकको रूपमा पहिचान गरिएको छ, कार्डको जिम्मेवार छ। Yबाहेक अरू कसैलाई मात्र तपाइँलाई कार्ड, पिन र यो कसरी प्रयोग गर्ने र के खरीद गर्ने निर्देशनहरू दिई तपाइँको लागि किनमेल गर्न भन्नुहुनेछ। सचेत रहनुहोस् कि जब तपाईं यो जानकारी प्रदान गर्नुहुन्छ तपाईं तिनीहरूको कार्यको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। खाद्य लाभहरू प्रयोग भएमा प्रतिस्थापन हुने छैन।
स्टोरले हस्ताक्षर वा आईडी जाँच गर्दैछ?
होइन। किनमेल गर्ने व्यक्तिलाई केवल कार्ड र पिन चाहिन्छ।
म eWIC को साथ किनमेल गर्न सक्छु?
WICShopper मा "WIC Store" सुविधा प्रयोग गर्नुहोस् वा क्षेत्र WIC स्टोरहरूको बारेमा सोधपुछ गर्न तपाईंको स्थानीय WIC क्लिनिक कल गर्नुहोस्।
के म अझै पनि फाईदा लिन क्लिनिक जान आवश्यक छ?
तपाईको स्थानीय क्लिनिक कल गर्नुहोस् कि निर्धारण गर्न को लागी तपाइँ आउन आवश्यक छ, वा यदि तपाइँको कार्ड र सुविधाहरू टाढा बाट जारी गर्न सकिन्छ। तपाइँ अझै पनी क्लिनिकमा सर्टिफिकेसन, उचाई, तौल, र रगत को लागी जान सक्छ।
यदि एउटा खाद्य वस्तु जुन मलाई लाग्छ मेरो eWIC कार्ड द्वारा तिर्नुपर्दछ र छैन भने, म कसरी त्यो जानकारी WIC लाई पठाउने छु?
प्रयोग गर्नुहोस् "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"WICShopper मा सुविधा UPC र उत्पादन जानकारी WIC मा पेश गर्न!
तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ vi.alaska.gov विचारको लागि खाद्य पदार्थ सबमिट गर्ने बारेमा जानकारीको लागि।
खाना पूर्वावलोकन गरिन्छ, र या त स्वीकार गरिएको छ वा पेश गरिएको 30 दिन भित्र अस्वीकार गरिन्छ। नयाँ स्वीकृत खाद्य पदार्थहरू अप्रूव्ड फूड लिस्ट (एपीएल) मा फेला पर्नेछन् जुन अलास्का डब्ल्यूआईसीको लागि अनुमोदित सबै फूडहरूको एक्सेल स्प्रेडशीट हो।
चेकको साथ WIC आईटमहरू अलग गर्नुपर्‍यो र छुट्टै लेनदेनको रूपमा चलाउनुपर्‍यो, eWIC ले कसरी काम गर्दछ?
तपाईंको खजांचीलाई थाहा दिनुहोस् तपाईंले WIC प्रयोग गर्नुहुनेछ ताकि उनीहरूले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नेछन्। केही स्टोरहरूले तपाईंलाई लेनदेनको लागि सबै चीजहरू सँगै राख्न अनुमति दिनेछ, तर WIC फूडहरू अरूबाट अलग गर्न सजिलो हुन सक्छ। सँधै तपाईंको eWIC कार्ड FIRST चलाउनुहोस्, त्यसैले बाँकी खाद्य वस्तुहरू अन्य भुक्तानीको लागि पहिचान गर्न सकिन्छ (जस्तै SNAP, TANF, डेबिट / क्रेडिट, वा नगद)। लेनदेन स्वीकार गर्नु अघि WIC लाई "चार्ज गरिएको" खाद्य पदार्थ समीक्षा गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
WICShopper मा उत्पादनहरू स्क्यान गर्दै
अनुमति दिइयो - यो आईटमहरू अलास्का WIC को लागि अनुमति छ र तपाईंसँग यस आईटमलाई खरीद गर्न WIC फाइदाहरू छन्!
अलास्का WIC स्वीकृत खाद्य सूची